Mararin’ny Coronavirus Tsy misy ahiana ny ain’ireo olona 19
Tahotra diso tafahoatra Isan’ny mampihena hery fiarovana
Na hohanina daholo aza ny karazana legioma sy voankazo ary atao daholo ihany koa ity karazana raokandro rehetra ity dia zava-poana rehefa tafahoatra ny tahotra ny aretina COVID 19,
Mpiasan’ny fahasalamana Notoloran’ny fanjakana Amerikana arotava 4.000 isa
Nahazo arotava miisa 4.000 ireo mpiasan'ny fahasalamana lohalaharana amin’ny ady atao amin’ny COVID-19 ao Toliara sy Moramanga.
Rafanomezantsoa Jean Nirina “Notambazana 4 miliara Ar aho saingy tsy nanaiky”
Taorian’ireo resabe nandeha momba azy tao anaty tambajotran-tserasera facebook mikasika ny tsy fahafahany manao dokam-barotra intsony dia nivoaka tamin’ny fahanginana ny Filohan’ny FI.TRA.MA
Mirongatra ny gripa mahery Tsentsina be ny orona, tsy mahare fofona…
Efa ho tapa-bolana izao no nitaraina ny ankamaroan’ny olona fa misy gripa mahery miparitaka eto amintsika.
CSB II Sabotsy Namehana Maty teo am-pilaharana ilay lehilahy
Tsy hay izay nanjo ny lehilahy iray nilahatra hizaha fahasalamana tetsy amin’ny CSB II Sabotsy Namehana ny faran’ny herinandro teo fa dia maty teo am-piandrasana teo ilay lehilahy.
Minisitry ny Fahasalamana Zava-dehibe aminy ny fitantanana mangarahara
Nitafa sy nifampidinika tamin’ireo filohan’ny Sendika sy solontenan’ny mpiasa ao anatin’ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka ny Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka Pr Ahmad Ahmad sy ny Sekretera Jeneraly Pr Solofomalala Gaëtan Duval ary ny Talen’ny kabinetra ny 03 jolay 2020.
Mivoatra hatrany ny antontam-baovao mahakasika ny valan’aretina coronavirus eto Madagasikara. Tamin’ny 60 nanaovana fitiliana dia ireo natoka-monina sy nifampikasoka taminy, dia ny 2 tamin’ireo no voamarina fa misy ny tsimok’aretina coronavirus.
Nahitana tranga vaovao 2 indray izany omaly, ka vehivavy avokoa izy ireo, manome ny antontan’isa ho 19 hatramin’ny omaly. Mbola ao anatin’ny “cas importés” avy any ampitan-dranomasina avokoa ireo tranga tamin’ny sidin’ny Air Madagascar ny MD 51 tonga ny 18 martsa no nisy ireto olona vao voa ireto, rah any fanazavan’ny Pr Vololontiana Hanta Marie Danielle avy amin’ny Centre de Commandement Operationnel na ny CCO Covid 19 eny amin’ny MBC Ivato. Marihina fa 2 na 3 any amin’ny faritra sisa no tsy tratra antso tamin’ireo mpandehan’io zotram-piaramanidina MD 51 an’ny Air Madagascar tonga io tamin’ireo 22 nanaovana antso avo, ary efa fantampatatra avokoa ny toerana misy azy, raha ny fanazavan’ny minisitry ny serasera sy ny kolontsaina Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo. 18 tsisy soritr’aretina sarotra, 1 nanavy, efa nihatsara. Tsy misy ny tranga sokajiana ho sarotra na “grave”, tsy ilana fitaovana manampy ara-pisefoana hatreto, rah any fanazavana. Miara-miasa amin’ny OMS sy ny Institut Pasteur de Madagascar na ny IPM moa ny CCO Covid 19 amin’ny andraikitra iantsorohany.